अन्योलमा फस्यो बूढीगण्डकी « प्रशासन
अन्योलमा फस्यो बूढीगण्डकी
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार आव २०७३/७४ मा विनियोजित रु पाँच अर्ब ३३ करोड ४७ लाख ९२ हजारमध्ये पाँच अर्ब छ करोड ६५ लाख १० हजार खर्च भएको छ । समग्रमा वित्तीय प्रगति ९५ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ९५ दशमलव ०२ प्रतिशत भएको छ । तर संरचनागतरुपमा प्रष्ट निर्णय नहुँदा स्थानीय प्रभावित भने समस्यामा परेका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतका अनुसार गोरखातर्फ ८९३ जनाको तीन हजार ३०४ रोपनी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा आइसकेको छ । उक्त जग्गाका लागि दुई अर्ब छ करोड मुआब्जा वितरण भएको छ । यस्तै धादिङतर्फ एक हजार १०० जनाको चार हजार ९२८ रोपनीको दुई अर्ब ३० करोड मुआब्जा वितरण गरिएको छ । गोरखाको तत्कालीन घ्यालचोक, भुम्लिचोक, दर्बुङ तथा धादिङको सलाङ, मैदी र खरी गाविसका प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गरिएको छ । अन्य प्रभावित क्षेत्रको क्रमशः सूचना प्रकाशित गरी मुआब्जा वितरण गर्ने तयारीमा स्थानीय प्रशासन लागेका छन् ।
गत जेठ २१, २०७४ मा तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले चिनियाँ कम्पनीसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । समझदारी पत्रअनुसार हस्ताक्षर भएको मितिले दुई हप्ताभित्र आयोजना निर्देशक समिति गठन गर्ने र त्यसमा नेपाली र चिनियाँ पक्षका पाँच/पाँचजना सदस्य मनोनयन गर्ने तथा उक्त समितिको कम्तीमा दुई महिनामा एकपटक बैठक बस्ने उल्लेख भए पनि हालसम्म समितिसमेत गठन हुन सकेको छैन । समझदारी पत्रको अवधि एक वर्षको हुने र सो अवधिभित्र तेस्रो पक्षलाई आयोजनाको कामसँग सम्बन्धित कुनै पनि ठेक्का सम्झौता गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
ऊर्जा मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बूढीगण्डकीसँग भएको समझदारी पत्रलगायत अन्य विषयमा आफूले अध्ययन गरिरहेको र कुनै निर्णय नगरेको बताए । उनले स्थानीय प्रभावितसँगको भेटघाटका क्रममा उपयुक्त निर्णय गर्ने बताउँदै आएका छन् ।
उनीहरुले समझदारी पत्रमा सामान्य प्रचलन विपरीत कर्मचारीले नभए राजनीतिक नेतृत्वले किन हस्ताक्षर गर्यो ? त्यसको वैधताको जाँच कहाँ र कसरी गर्ने भन्ने विषय पहिले प्रष्टिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यस्तै दुई खर्ब ६० अर्ब लागतको सो आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ अनुसार दिन मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने प्रश्नको पनि हल हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
सरकारले फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टवेलमार्फत तयार पारेको सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत डिजाइन र त्यसको खर्च के हुने भन्ने प्रश्न पनि कायम रहेको छ । उक्त अध्ययनका लागि मात्रै दुई अर्ब खर्च भएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रका जानकार तथा इन्जिनियर डा. नारायण चौलागार्इं सरकारले चिनियाँ कम्पनीसँग भविष्यमा हुने वित्तीय सम्झौताका कानूनी तथा नीतिगत आधार के हुने ? सार्वजनिक खरिदका लागि वित्तीय सम्झौतामा हुनुपर्ने प्रक्रियागत अवयव, पारदर्शिता, मितव्ययिता र शुद्धताको सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्ने बताउछन् ।
Tags : बूढीगण्डकी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना
7 December, 2021 7:55 pm
खोप अभियानलाई तीव्रता दिइनेछ : मन्त्री खतिवडा
नुवाकोट । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप
7 December, 2021 7:23 pm
विराटनगर । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशिराज दाहालको अध्यक्षतामा जिल्ला